यि हुन हावा शुद्ध गर्ने ५ बिरुवा ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यि हुन हावा शुद्ध गर्ने ५ बिरुवा !
मेरो लाइफस्टाइल || 27 February, 2021
दिलिप बादे, जय किसान नर्सरी
शहरी क्षेत्रमा वातावरण प्रदुषण बढेको कारण खुला हावामा श्वास फेर्न गाह्रो हुँदै गएको छ । वातावरण प्रदुषित भएकै कारण मानिसहरुमा मुटु तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धि धेरै समस्याहरु देखापरिरहेको छ । अहिले वातावरणलाई केही हदसम्म शुद्ध पार्न कुनै न कुनै बोटबिरुवाहरु घर भित्र र घर बाहिर रोप्न वातावरणविद्हरुले सुझाई रहेका छन् । घरभित्र पनि रोप्न मिल्ने यस्ता धेरै किसिमका बोटविरुवाहरु रहेका छन् जसले हाम्रो कोठाको मात्र नभएर घर वरिपरीको वातावरणलाई समेत स्वच्छ राख्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ ।
सेतो फुल फुल्ने तथा हरियो लामो पात हुने पीस लिली लोकप्रिय इण्डोर प्लान्ट मानिन्छ । यो विरुवाको हेरचाहगर्न सजिलो, थोरै सूर्यको प्रकाश भए पुग्ने, हप्तामा एक पटकमात्र पानी दिए हुने तथा महिनामा एक पटक थोरै मल हाले पुग्ने बिरुवा हो ।
विभिन्न अध्ययनले पिस लिली एक उच्चकोटिको वायु शुद्धगर्ने गुण भएको बिरुवा मानिन्छ । यसले कोठामा ह्युमिडिटी ५ प्रतिशतसम्म बढाउने गर्छ । कोठाहरुमा ह्युमिडिटी रहनाले राती निन्द्रा राम्रोसँग लाग्छ । कम ह्युमिडिटी भएको अवस्थामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धि समस्या हुने, छाला तथा कपाल सुख्खा गराउने र हानिकारक भाइरस तथा किटाणुहरु बढाउने गर्छ । घरमा पीस लिलीको बिरुवा रोप्ने हो भने हाम्रो वरपरको हावा शुद्ध हुनुका साथै हाम्रो स्वस्थ्यमापनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
झट्ट हेर्दा सर्प जस्तो देखिने हुनाले यो बिरुवालाई स्नेक प्लान्ट भनिन्छ । यो बिरुवामा उच्च स्तरिय प्राकृतिक वायु शुद्धगर्ने गुण हुन्छ । यो बिरुवाले रातमा समेत अक्सिजन प्रदान गर्छ, त्यसैले यो बिरुवा बेडरुममा राख्दा रातमा गहिरो तथा राम्रो निन्द्रा लाग्ने गर्छ । स्नेक प्लान्टले श्वास प्रश्वास सम्बन्धि रोगहरु बढाउने हानिकारक रसायनहरु जस्तैः जाइलिन, टोल्युइन, बेजिन र फर्मल्डिहाई हटाउने कार्य गर्छ । स्नेक प्लान्टलाई कम प्रकाश भएपुग्छ, यसको हेरचाहगर्न सजिलो समेत छ । यो बिरुवा रोप्दा घरको सुन्दरतापनि बढ्छ ।
एलोभेरा (ध्यू कुमारी)
एलोभेरालाई अत्यन्त कममात्र पानीको आवश्यकता पर्छ । यसको पातमा प्रकृतिक रुपमा नै प्रशस्त पानीको जेल हुने भएकोले थोरै पानी भएको स्थानमा पनि यो बिरुवा सर्छ । एलोभेरामा पाईने जेल घरायसी रुपमा हुने उपचारहरुमा पनि प्रयोग हुन्छ जस्तैः आगोले पोलेको ठाँउमा यसको जेल लगाउँदा यसले जलन कम गर्छ, कपाल तथा छालामा हुने रुखोपनको उपचारका लागिपनि यो उपयोगी मानिन्छ । यो बिरुवाले रातमा पनि अक्सिजन उत्पादन गर्छ यदी सुत्ने कोठामा यो बिरुवा छ भने यसले राम्रो निद्रा पार्छ ।
हरियो, पहेलो, सेतो साथै विभिन्न छिर्के मिर्के रङ्गहरुमा हुने यो बिरुवा इन्डोर प्लान्टहरुमा बढि रुचाइने बिरुवा हो । लहरा बनेर फैलने यो बिरुवाले घरको सुन्दरतालाई बढाउने गर्छ । यो बिरुवाले घरमा रहेका हानिकारक विषाक्त पर्दाथहरुलाई शुद्धिकरण गर्नुका साथै सकारात्मक उर्जाको निर्माणमा सहायता गर्छ । यसलाई पानीमा मात्र पनि हुर्काउन सकिन्छ । यो बिरुवा कोठामा राख्नाले घरको सौन्दर्य बढ्नुको साथसाथै वरपरको वातावरण पनि स्वच्छ हुन्छ । कमै हेरचाहमा पनि हुर्कने यो बिरुवा घरमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्पाइडर अर्थात माकुरा जस्तै देखिने भएको हुनाले यो बिरुवालाई स्पाइडर प्लान्ट भनिएको हो । हेर्दा अत्यन्त मनमोहक र हुर्काउन अत्यन्त सजिलो यो बिरुवामा एक प्रकारको हावा शुद्धपार्ने गुणपनि हुन्छ । घरमा विभिन्न कारणले उत्पन्न हुने हानिकारक फर्मल्डिहाइड नामक रसायनलाई यसले फिल्टर गर्छ । गमलामा रोपिएको बिरुवाको मुख्य भागबाट अरु सहायक हांगाहरु निस्किएर थप साना–साना अरु बिरुवाहरु हावामा झुन्डिएको जस्तो देखिने यो बिरुवाले तपाईको घरको सुन्दरता समेत बढाँउछ ।